Fampisehoana ho an'ny olon-dehibe ao Pattaya ~ Journey-Assist - Mandehana Go. Shina Ping Pong. fivarotan-tena
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Fampisehoana lehibe ao Pattaya
Fampisehoana Ping Pong. Go-Go Bars, Prostitution, sns (18+)
3 Desambra, 2019
Aiza ao Pattaya no hijerena fialamboly olon-dehibe
Fampisehoana Ping Pong
Famonoana olona ao Pattaya. mpivaro-tena
Ny andrim-panjakana malaza indrindra amin'ity karazana ity dia ireo antsoina hoe Mandehana-Go ny bara (Mandehana-mandeha). Ny anarana hoe Go-Go no anaran'ilay fomba fandihizana ho an'ireo andrim-panjakana karazana.
Ny fidirana amin'ny fitsangantsanganana Go-Go matetika dia maimaimpoana. Ny loharanon'ny fidiram-bolam-panjakana dia ny fivarotana zava-pisotro amin'ny vidiny miakatra. Ohatra, ny tavoahangy rano tsotra indrindra amin'ny barany dia mety mitentina 100 baht, ary labiera avy amin'ny 150 до 500 Baht. Ary amin'ny fomba, tena mila mividy fisotro ho an'ny tenanao ianao. Ireo no toe-javatra.
Go-go bar. Video
Ny mpitsidika tsirairay dia afaka misafidy ny tovovavy tiany, manasa azy ho eo amin'ny latabany ary hanolotra azy, ilay antsoina hoe, ranomandry (ladydrink) (tsy mividy zava-pisotro ho an'ny zazavavy dia tsy ilaina, fa fepetra takiana mba hiresahana aminy). Amin’ny fizotrany fifandraisana, raha misy ankizivavy te manaja azy ka tsy manadino, dia afaka mitondra azy ny mpitsidika miaraka aminy.
Izany dia mitranga fa raha vao miditra amin'ny barika toy izany ianao, dia nisy tovovavy tonga avy nanontany tena ho azy ladydrink. Ary anjaranao manokana ny mitsabo azy na hazavao tsara fa te hahita ireo zazavavy hafa aloha ianao.
Zava-dehibe ihany koa ny hahafantatra fa raha te-haka tovovavy halavirana amin'ny Go-Go ianao dia mila mandoa ilay andrim-panjakana ianao. Bar Fine (Bar Fine - dapa tsara). Tamin'ny taona 2019, Bar Fine no nandrafitra ny bara go-go tany Pattaya avy 500 до 1000 Baht.
Fampisehoana ping pong na Sex show na Seho fax na Fampisehoana Pussy -
hetsika isan-karazany amin'ny olon-dehibe any Pattaya, ao anatin'izany ny trika isan-karazany miaraka amin'ny taovam-pananahana (indrindra ny vehivavy) - ohatra, "tifitra" miaraka amina baolina ho an'ny tenisy latabatra, fandrehitra sigara, manala rojo vy vita amin'ny toerana akaiky.
Famonoana olona ao Thailand. Prices sy fitsipika
Ho an'ireo mpivady niforona manerana an'i Pattaya, ary amin'ity làlana ity, indrindra indrindra dia afaka mahita doka momba ny fanofa trano mandritra ny adiny iray ianao, raha toa ka tsy te hitondra ilay tovovavy ho ao amin'ny efitranon'ny hotely ianao.
Mandeha an-dalambe / Lalana amoron-dranomasina any Pattaya amin'ny sarintany
Current weather Walking Street in Pattaya
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany ahitanao ny toetrandro ankehitriny amin'ny Pattaya Walking Street. Ao amin'ny farany ambany dia misy elanelam-potoana ahafahanao mandroso amin'ny fotoana, noho izany ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Trano fandraisam-bahiny an-dalamben'i Pattaya
Salanisan'ny salanisa 4.9 / 5. Isan'ny isa: 10